Malayzia: Namely ny atsimon’i Malayzia ny onjan-tondradrano faharoa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Jolay 2018 3:00 GMT
Andro vitsy taorian'ny nanombohan'i Malezia ny Visit Malaysia Year 2007, niharan'ny oram-be mivatravatra ny fanjakana Atsimon'i Malezia Johor izay nitarika azy mankany amin'ny onja tondradrano.
Hatramin'ny fotoana nanoratana, nitatitra ny fanaraina SMS alefan'ny The Star, iray amin'ireo gazety malaza mpivoaka isan'andro ao Malezia fa nitombo avo roa heny hatramin'ny 50.172 tao amin'ny foibe fanampiana miisa 208 ny isan'ireo niharam-boina tamin'ny tondradrano tao Johor. Ny faritra manodidina ny renivohi-panjakana Johor Baru no tena anisan'ny voa mafy, izay olona maherin'ny 20.000 no nafindra toerana.
Nanome toky ny praiminisitra Abdullah Ahmad Badawi fa hanao izay rehetra azony atao ny governemanta mba hanomezana fanampiana ho an'ireo niharam-boina tamin'ny tondradrano, nampanantena fanampiana fanampiny RM500 (142,245 dolara) ho an'ny fianakaviana tsirairay voakasika. Napetraka ny programa tanàna fandraisana natao hanampiana ireo tra-boina noho ny tondradrano ary antsoina ny Maleziana mba hanampy am-pitiavana.
Tafahitsoka tao Kota Tinggi, iray amin'ireo faritra voa mafy indrindra ilay bilaogera antsoina hoe xpyre mandrapanadiovan'ny manampahefana ny iray tamin'ireo fivoahana mba hampizotra ny fifamoivoizana. Nanesy ireo toe-javatra mitranga ilay bilaogera Linken Lim izay tafahitsoka koa tao amin'ny iray amin'ireo faritra voakasika ary namoaka fangatahana fanampiana amin'ny vahoaka avy amin'ilay bilaogera hafa Marina Mahathir.
Nalahelo noho ny tondradrano i Mom's Daily ary nanazava ny antony mahatonga ny FTMF (ONG) sy ny fikambanana maro te-hampiroborobo ny fampinonoana zaza mba hiantohana ny fahaveloman'ny zaza na dia ao anatin'ny loza mahatsiravina indrindra tahaka izao aza. Na dia ilay mpananihany mahazatra Rojaks Daily aza mba nanome voninahitra an'ny kukujiao.com noho ny fanoloran-tenany hanampy ireo niharan'ny tondra-drano tamin'ny alalan'ny hetsika tena izy. Mila samaritana tsara tahaka azy i Malezia!
Mandritra izany fotoana izany, miantso ny vahoaka ankapobeny ny Fikambanana Volatsinana Mena Malayziana (MCRS), anisan'ireo antsoina ny sehatra tsy miankina, orinasa, fikambanana mba halala-tanana hitondra anjara biriky ao amin'ny Tahirim-bolan'ny Volatsinana Mena Maleziana [Vokovoko Mena ihany fa satria firenena betsaka miozolomana i Malayzia no iantsoana ilay fikambanana ho Volatsinana] izay natsangana mba hanomezana fanampiana ara-bola sy fanavotana ireo olona voakasiky ny tondra-drano vao haingana.